Mitadiava fiadanam-po anaty - Fiangonan'Andriamanitra any Suisse eran-tany
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2018-04 > Mitadiava fiadanana anaty
Tsy maintsy miaiky aho fa sarotra indraindray ny mahita fiadanana. Tsy miresaka momba ny “fiadanana mihoatra lavitra noho ny fahalalana” aho izao (Filipianina 4,7 Fandikan-teny Genève Vaovao). Rehefa mieritreritra ny fiadanana toy izany aho, dia maka sary an-tsaina ankizy iray Andriamanitra mampionona ao anatin’ny tafio-drivotra mahery vaika. Mieritreritra fitsapana mafy aho izay hampiofanana ny hozatry ny finoana hatreo amin'ny toerana misy ny endorphin'ny "fiadanana". Mieritreritra krizy izay manova ny fomba fijerintsika aho ary manery antsika handinika sy hankasitraka ireo zavatra manan-danja indrindra eo amin'ny fiainana. Rehefa mitranga ny trangan-javatra toy izany, dia fantatro fa tsy voafehiko ny fiafarany. Na dia mamporisika ny fonao aza izany, dia tsara kokoa ny mametraka izany amin’Andriamanitra.
Miresaka fihavanana "isan'andro" aho, izay mety hiantsoan'ny sasany hoe fiadanan-tsaina na fandriampahalemana anaty. Raha ny nolazain'ilay filozofa malaza Anonymus indray mandeha hoe: «Tsy ny tendrombohitra akory no eo anoloanao manelingelina anao. Voky ny fasika amin'ny kiraronao izany. Ireto ny sasany amin'ireto fasika ireto: eritreritra manahy izay manelingelina ahy, ahiahy nefa tsy manana antony hiheverana ny ratsy indrindra fa tsy tsara indrindra amin'ny hafa hamadika ny moka ho elefanta; very ny foto-kevitro, sosotra aho satria misy zavatra tsy mety amiko. Te-hamely olona tsy masiaka aho, tsy masiaka na manelingelina.
Ny fiadanam-po ao anaty dia lazaina ho ny filaminana sisa (Augustine: tranquillitas ordinis). Raha marina izany dia tsy hisy fiadanana raha tsy misy ny filaminana ara-tsosialy. Indrisy anefa fa matetika isika no tsy ampy filaminana eo amin’ny fiainana. Matetika ny fiainana dia misavoritaka, sarotra ary mahasosotra. Mitady fihavanana ny sasany ka lasa mifoka sigara, mifoka rongony, mitady vola, mividy zavatra, na mihinana. Betsaka ny sehatra tsy voafehiko amin'ny fiainako. Na izany aza, amin'ny fiezahana mampiasa ny sasany amin'ireto fanazaran-tena manaraka ireto eo amin'ny fiainako, dia afaka mahazo ny sasany amin'izany fiadanan-tsaina izany aho, na dia amin'ny toerana izay tsy hahafehy ahy aza.
Mikarakara ny raharaha manokana aho.
Mamela ny hafa sy ny tenako aho.
Adinoko ny lasa ary manohy hatrany!
Tsy tototry ny alahelo aho. Mianatra aho "Tsia!" milaza.
Faly aho ho an'ny hafa. Aza mialona azy ireo.
Ekeko izay tsy azo ovaina.
Mianatra manam-paharetana sy / amin'ny fandeferana aho.
Mijery ny fitahiako aho ary feno fankasitrahana.
Misafidy tsara am-pitiavana ny namana aho ary manalavitra ny olon-dratsy.
Tsy mandray ny zavatra rehetra manokana aho.
Manatsotra ny fiainako aho. Manala ny fifangaroana aho.
Mianatra mihomehy aho.
Mampiadana ny fiainako aho. Nahita fotoana mangina aho.
Manao zavatra tsara ho an'ny olon-kafa aho.
Mihevitra aho alohan'ny hitenenako.
Na izany aza, ity dia mora kokoa noho ny vita. Azo inoana fa raha tsy manao ny zava-miafina etsy ambony aho dia tsy misy olon-kafa hanome tsiny an'iza afa-tsy ny tenako.Mahatezitra ahy matetika amin'ny hafa aho rehefa manao azy Mety ho nanalavitra ilay olana ary nitarika vahaolana tsara.
Heveriko: Farany, ny fiadanana rehetra dia avy amin'Andriamanitra - ilay fiadanana izay mihoatra lavitra noho ny fahalalana sy ny fiadanana anaty. Tsy hahita fiadanana marina isika raha tsy mifandray amin’Andriamanitra. Andriamanitra manome ny fiadanany ho an’izay matoky Azy (Jaona 14,27ary izay miantehitra aminy (Isaia 26,3) mba tsy hanahy na inona na inona izy ireo (Filipiana 4,6). Mandra-piraisantsika amin’Andriamanitra, dia mitady fiadanana foana ny olona (Jer6,14).
Hitako fa tokony hihaino ny feon'Andriamanitra bebe kokoa aho ary tsy ho sosotra - ary manalavitra ny olona tsy misaina, tsy masiaka na manelingelina.
Nisy nieritreritra teo amin'ny farany
Izay manelingelina anao dia mifehy anao. Aza avela hangalatra ny fiadananao ny hafa. Miaina ao amin'ny fiadanan'Andriamanitra.